Ungasusi iitafile ezivela kwindawo yolwazi yokuFikelela-Isikhokelo samanyathelo ngenyathelo
Ikhaya iimveliso DataNumen Access Repair Ungasusi iitafile ezivela kwindawo yolwazi yokufikelela
Ungasusi iitafile ezivela kwindawo yolwazi yokufikelela
Xa ucima ezinye iitafile kwiziko ledatha leMicrosoft Access (.mdb okanye .accdb) ngempazamo kwaye ufuna ukuzifumana kwakhona, ungasebenzisa DataNumen Access Repair ukuskena .mdb okanye .accdb iifayile kunye nokubuyisa iitafile ezisusiweyo kwiifayile kangangoko kunokwenzeka.
Phawula: Phambi kokuba uphinde ufumane iitafile ezisusiweyo kufikelelo kwi-mdb okanye kwifayile ye-accdb nge DataNumen Access Repair, nceda uvale iMicrosoft Access kunye nezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile ye-mdb okanye ye-accdb.
Cofa kwindawo ethi "Khetha", kwaye uqiniseke "Buyisa iitafile ezicinyiweyo" inketho ihlolwe.
Khetha ukufikelela kwi-mdb okanye kwi-accdb ifayile eza kulungiswa:
Ungafaka igama lefayile le-mdb okanye le-accdb ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile.
Ngokuzenzekela, DataNumen Access Repair izakugcina indawo yogcino lwedatha emiselweyo kwifayile entsha enegama le-xxxx_fixed.mdb okanye i-xxxx_fixed.accdb, apho i-xxxx ligama lomthombo we-mdb okanye ifayile ye-accdb. Umzekelo, kwifayile eyiDamaged.mdb, igama elingagqibekanga lefayile emiselweyo iya kuba yiDamaged_fixed.mdb. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Access Repair Ndiza start ukuskena kunye nokufumana kwakhona iitafile ezisusiweyo kumthombo we-mdb okanye we-accdb. Inkqubela phambili bar
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ezinye iitafile ezikwi-database mdb okanye kwi-accdb database zinokufunyanwa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo enje:
Ngoku unokuvula i-mdb okanye i-accdb database ene-Microsoft Access okanye ezinye iinkqubo kwaye ujonge ukuba iitafile ezisusiweyo zifunyenwe ngempumelelo.
apho ungacofa khona iqhosha ukubona ingxelo eneenkcukacha zazo zonke iitafile, amasimi, iitafile, ubudlelwane kunye nezinye izinto ezifunyenwe, ngolu hlobo:
Kodwa ingxelo yedemo ayizukuvelisa ifayile esisigxina. Ndiyacela odola ingxelo epheleleyo ukufumana ifayile emiselweyo.